ချစ်သူမရှိသေးသူများအဖွဲ့ - ရွှေမြို့တော်
Nyein Lwin Ooမှတည်ဆောက်ခဲ့သည်
နောက်ဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်: Oct9ဒါကိုကြိုက်တယ် အဖွဲ့ဝင် 214 ဦးကြိုက်ခဲ့သည်
တစ်ယောက်တည်းဘဝမှာ ချစ်ကျွမ်းဝင်ဖို့မေ့သွားတယ် တစ်ယောက်တည်းဘဝမှာ ခင်မင်မှုတွေကိုတွယ်တာလာတယ်
တစ်ယောက်တည်းဘဝမှာ အထီးကျန်တာကလွဲလို့ ပျော်ဖို့ကောင်းလာတယ်
တစ်ယောက်တည်းဘဝမှာ မိဘနဲ့ မောင်နှမကိုပိုအရေးပေးလာတယ်
တစ်ယောက်တည်းဘဝမှာ အတွဲလေးတွေတွေ့ရင် စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုတော့ ဖြစ်သွားတယ်
တစ်ယောက်တည်းဘဝမှာ ဖိနပ်တွေအများကြီးဝယ်ဖြစ်တယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဝေးရာကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့
တစ်ယောက်တည်းဘဝမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျံသန်းနိုင်တယ်
တစ်ယောက်တည်းဘဝမှာ အချစ်ကိုအလေးမထားနိုင်တော့ ငွေကြေးနဲ့အလုပ်ကိုအရေးပေးလာတယ်
တစ်ယောက်တည်းဘဝမှာ ကြာလာတော့ အထီးကျန် ဝမ်းနည်းလာတယ်
‘လူတွေ ငါ့ကို မယုံကြပဲ မေးတယ်………………………
တစ်ယောက်တည်းဘဝမှာ ကျင့်သားရနေလို့ပါ……ရေးသားသူ-နိုဝင်ဘာပုလဲ novemberpearl
အချစ်မရှိသောသူ. မှစတင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး Oct 9. တွင် အမုန်းမင်းသားလေး မှ နောက်ဆုံးပြန်လည် ပြောကြားခဲ့သည်3ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
အချ စ်အချ စ်ဆိုတာဘာလဲ ဘာမှနားမလည်ဘူးဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် အချစ်စစ်ရှာဖွေသူ
Mar5တွင် လောကလူသား မှစတင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်0ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
တစ်ခါတစ်လေ အချစ်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါ အချစ်စစ် ကိုသာငါလိုချင်မိတယ် ငါဝန်ခံပါတယ် နင့်ကိုငါအချစ်စစ်နဲ့ချစ်ခဲ့တာပါ အချစ်ကပျော်ရွှင်မှုတွေပေးနိုင်သလို ဝမ်းနည်းမှုကိုလဲ…ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် အချစ်သိပါစေ
ချစ်တယ်ဟုတ်. မှစတင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး Mar 5. တွင် လောကလူသား မှ နောက်ဆုံးပြန်လည် ပြောကြားခဲ့သည် 1 ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
ကျွန်တော်သည် မိန်းကလေတစ်ယောက်ကိုချစ်မိပါတယ် သူအချစ်ကိုပြန်ရဖို့လဲကြိုစားပါတယ် အခုထိတော့မရသေပါဘူ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်မဆုတ်ဘူ ဘကြောက်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်အပေါ် သူလဲချစ်နေပါတယ်…ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် ရူးသွပ်ခြင်း
Nyein Khant. မှစတင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး Dec 4, 2014. တွင် 1dwfooxtw8meo မှ နောက်ဆုံးပြန်လည် ပြောကြားခဲ့သည် 1 ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
ကောင်မလေးမင်းကိုစတွေ့တုန်းကပေါ့ငါ့ရင်တွေခုန်လိုက်တာ ပေါက်ထွက်မတတ်ပါပဲ…ကောင်မလေးမင်းနဲ့ငါစကားစပြောဖြစ်တဲ့အချိန်ကံကြမ္မာကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာပြောမပြတတ်လောက်အောင်ပါပဲကောင်မလေ်းဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် အားလုံး ကြည့်ရန်
ရင်ထဲက ခံစားချက်များ အမှတ်တရ ရေးခဲ့သည့် နေရာ
မှက်ချက်ပေးရန်အတွက် မြို့တော်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ပြီးသူဖြစ်ပါကလည်း ချစ်သူမရှိသေးသူများအဖွဲ့ တွင်းဝင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်
1:09amမှာဇူလိုင်လ 24, 2012 တွင် minkhantko1234567890 မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် တားတားကို ချစ်သူရှာပေးနော် အခုထိချစ်သူမရှိသေးဘူးသိလား တယောကိထဲပျင်းနေတယ်သိလား ရုပ်မချောချင်နေပါဗျာ သဘောကောင်းဘို့ ရ၏အရေးကြီးတယ်နော် သိလား
တားတားချစ်သူကိုပေးတာနော် ဘယ်သူမှာ မဒေါင်းနဲ့ နော်သိလား ဒေါင်းတဲ့ လူနာ့ ချစ်သူပဲနော်
အပေါက်ဝကနေ သူချစ်သူကိုမျှော်နေတယ်တိလား လာခဲ့ နော် အမြဲတမ်းဖွင့့်ထားတယ်တိလား 12:54amမှာဇူလိုင်လ 16, 2012 တွင် မိုးသွင်သာလွင် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် အဖွဲ့ဝင်ခဲ့ပါပြီ....အားလုံးနဲ့ခင်ချင်ပါတယ်နော်.............. 8:19pmမှာဇူလိုင်လ 12, 2012 တွင် Ingyin Thant Zin မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် CHIT R TAR AYAN MAW TAL......ACHIT KYI LAY...........PO KHAN SA R TAL... 5:17pmမှာဇူလိုင်လ 10, 2012 တွင် minkhantko1234567890 မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ချစ်သူမရှိသေးသူများနှင့် လဲ ခင်ချင်ပါတယ်နော် သိလား 5:16pmမှာဇူလိုင်လ 10, 2012 တွင် minkhantko1234567890 မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ဒို့ လဲ ချစ်သူမရှိသေးဘူးနော် ချစ်သူလိုချင်တယ်သိလား ချစ်သူလိုချင်တယ်သိလား လိုင်းပေါက ချစ်သူ ချစ်သူရှာပေးနော် ရွှေမြို့ တော်ရေ သိလား မျှော်နေမယ်နော် ရွှေမြို့ တော် အမြဲထာဝရတည်ရှိပါစေ 12:30pmမှာဇူလိုင်လ 7, 2012 တွင် တေဇာအောင်.၇န်ကုန် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် အချစ်ကိုတွေခဲ့ပြိး2ဒါပင်မဲ့ကြောက်သွားပြိးအချစ်ကိုမလိုချင်းတော့ဘူး 2:57pmမှာဇူလိုင်လ 5, 2012 တွင် ယွန်းနဒီလင်း မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ယွန်းကတော့..စိတ်ညစ်နေတယ်..
ရူးသွားမှာစိုးလို့စထားတော့ပါဘူး.... 11:23amမှာဇွန်လ 20, 2012 တွင် လမင်းမောင် (လမင်း) (**m**c**) မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ရည်းစားဆိုတာ ဇီးပြား စားရသလို ချိုလားနော့ ရည်းစားဆိုတာ မဲမဲ ကြီးလား သဲတွေနဲ့လား ရည်းစား ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာကြီးလဲ ပြပေးကြပါအုံးနော် သူးငယ်ချင်းတို့ 12:48amမှာဇွန်လ 18, 2012 တွင် laminmgmg199 မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကံကလဲဆိုးလိုက်တာ ရွှေမြို့ တော်ထဲမှာတောင်ချစ်သူရှားနေတော့ 
၀င်ရတဲ့ အဖွဲ့ ကလဲ
ချစ်သူမရှိတဲ့ အဖွဲ့ မှကျွန်တော်နဲ့ ကိုက်ညီနေတာပဲဗျာ............. 1:50pmမှာဇွန်လ 5, 2012 တွင် Chit Thu မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် အပေါဆုံးက အကြွေး
ဘာမှမလုပ်ဘဲ မိဘလုပ်စာပဲ ထိုင်စားတော့မယ်။ <နောက်စာမျက်နှာသို့
လက်ဆောင်ပေးရန် aung aung
လက်ဆောင်ပေးရန် aung kyaw min
လက်ဆောင်ပေးရန် aung myat shwe
လက်ဆောင်ပေးရန် aung myint myat
လက်ဆောင်ပေးရန် Aung Thiha Oo
လက်ဆောင်ပေးရန် aye aye myint aung
လက်ဆောင်ပေးရန် aye myat mon
လိမ္မော်သီး အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
ကကြိုးသျှင် အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်